ပိုက်ဆံသိန်းချီကောက်ရပေမယ့် လောဘမရှိပဲ ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ရှာပြီး ပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး – Global News and Knowledge
ပိုက်ဆံသိန်းချီကောက်ရပေမယ့် လောဘမရှိပဲ ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ရှာပြီး ပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
ပိုက်ဆံသိန်းချီကောက်ရပေမယ့် လောဘမရှိပဲ ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ရှာပြီး ပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်လေးကို ဂုဏ်ပြုနိုင်အောင်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့အင်းစိန်ကညနမှာကားလိုင်စင်ဝင်တာ။ အကျိုးတေ်ာဆောင်နဲ့လုပ်တော့ နားနေဆောင်မှာအေးရာအေးကြောင်းfbသုံးနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံထဲကအကျီအဖြူနဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟုတ်ဟန်တော့မတူအကျိုးဆောင်လားပဲ။
တာ။ဘယ်သူဟာလဲအော်မေးနေတယ်။နားနေဆောင်ကလူတွေလဲမော့ကြည်ကြပေါ့။ပြီးတော့ခပ်လှမ်းလှမ်းကအမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူ့ကြောပိုးအိတ်ဖွင်ကြည့်ပြီးပြူးတူးပြာတာနဲ့ သူ့ဟာဖြစ်ကြောင်းဘဏ်မှ အခုမနက်ဆယ်သိန်းထုတ်ပြီး မည်၍မည်မျှသုံးကြောင်းမည်မျှကျန်ကြောင်းပြောပြတယ်။
ကောက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကရှည်ရှည်ဝေးဝေးရစ်မနေပဲချက်ချင်းပြန်ပေးတယ်။ပိုင်ရှင်ကလဲပိုက်ဆံရေရင်းလက်တွေတုန်နေတာ။ သူလဲပူထူပြီးမေ့နေဟန်တူတယ်။ နားနေဆောင်ထဲကလူအချို့ကမုန့်ဖိုးလေးပေးလိုက်ဦးလေလို့ပြောတော့2သောင်းလားမသိဘူး။လုံးဝမယူဘူးဗှာ။တစ်ကယ့်အရိုးခံ။
(မကွန်းကွန်းလို့ခေါ်တယ်ဗျ။အင်းစိန်ကညနရုံးအကူနေစားဝန်ထမ်းပါဗျ။ပွဲစားမဟုတ်ပါ။)ကျနော်ခွင့်တောင်းပြီးဓာတ်ဖမ်းခဲ့သေးတယ်။ဒီလိုလူမျိုး ရှားသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှုလေးကိုဂုဏ်ပြုစကား ဆိုရင်း အသိအမှတ်ပြုပေးကြရင်သူလည်း ပျော်ရွှင်မယ်ထင်ပါတယ်.
ပိုက္ဆံသိန္းခ်ီေကာက္ရေပမယ့္ ေလာဘမရွိပဲ ပိုင္ရွင္ကိုျပန္ရွာၿပီး ေပးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ေလးစားဖြယ္လုပ္ရပ္ေလးကို ဂုဏ္ျပဳနိုင္ေအာင္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။
ဒီေန႕အင္းစိန္ကညနမွာကားလိုင္စင္ဝင္တာ။ အက်ိဳးေတ္ာေဆာင္နဲ႕လုပ္ေတာ့ နားေနေဆာင္မွာေအးရာေအးေၾကာင္းfbသုံးေနတာ။အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာပုံထဲကအက်ီအျဖဴနဲ႕အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းဟုတ္ဟန္ေတာ့မတူအက်ိဳးေဆာင္လားပဲ။
တာ။ဘယ္သူဟာလဲေအာ္ေမးေနတယ္။နားေနေဆာင္ကလူေတြလဲေမာ့ၾကည္ၾကေပါ့။ၿပီးေတာ့ခပ္လွမ္းလွမ္းကအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သူ႕ေၾကာပိုးအိတ္ဖြင္ၾကည့္ၿပီးျပဴးတူးျပာတာနဲ႕ သူ႕ဟာျဖစ္ေၾကာင္းဘဏ္မွ အခုမနက္ဆယ္သိန္းထုတ္ၿပီး မည္၍မည္မွ်သုံးေၾကာင္းမည္မွ်က်န္ေၾကာင္းေျပာျပတယ္။
ေကာက္ရတဲ့အမ်ိဳးသမီးကရွည္ရွည္ေဝးေဝးရစ္မေနပဲခ်က္ခ်င္းျပန္ေပးတယ္။ပိုင္ရွင္ကလဲပိုက္ဆံေရရင္းလက္ေတြတုန္ေနတာ။ သူလဲပူထူၿပီးေမ့ေနဟန္တူတယ္။ နားေနေဆာင္ထဲကလူအခ်ိဳ႕ကမုန႔္ဖိုးေလးေပးလိုက္ဦးေလလို႔ေျပာေတာ့2ေသာင္းလားမသိဘူး။လုံးဝမယူဘူးဗွာ။တစ္ကယ့္အရိုးခံ။
(မကြန္းကြန္းလို႔ေခၚတယ္ဗ်။အင္းစိန္ကညန႐ုံးအကူေနစားဝန္ထမ္းပါဗ်။ပြဲစားမဟုတ္ပါ။)က်ေနာ္ခြင့္ေတာင္းၿပီးဓာတ္ဖမ္းခဲ့ေသးတယ္။ဒီလိုလူမ်ိဳး ရွားသြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ ရိုးသားျဖဴစင္မႈေလးကိုဂုဏ္ျပဳစကား ဆိုရင္း အသိအမွတ္ျပဳေပးၾကရင္သူလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္မယ္ထင္ပါတယ္.
Previous Article ပရိတ်သတ် အားပေးမှု အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ rapper x box ရဲ့ ဘ၀အကြောင်း
Next Article ကွယ်လွန်သွားရင် ပိုက်ဆံဆိုတာ ကိုယ့်နောက်မပါဟုဆိုကာ အကုန်လှူလိုက်တဲ့လင်မယား